यतिबेला देशमा कोरोना भाइरसको त्रास छ । विश्वभर फैलिएको यो महामारीले दुई लाख मानिसको ज्यान लिईसकेको छ । औषधि अझै पत्ता लगाउन सकिएको छैन । विश्वका मै हुँ भन्ने शासकहरु आफ्नो नागरिकलाई यो महामारीबाट कसरी बचाउने भनेर चिन्तित छन् । अहिलेसम्म हामी भाग्यमानी छौं की हामीले देशभित्र यो भाईरसबाट कसैलाई गुमाउनु परेको छैन । केहि व्यक्तिमा देखिएको संक्रमण पनि क्रमश निको हुँदै गएको अवस्था छ । सरकारले समयमै लकडाउन गरिदिएको कारण हामीमाझ भाईरस संक्रमण त्यति भयावह रुपमा फैलिन पाएन । यो एकदमै खुशीको कुरा हो ।
तर, दुःखको कुरा यहि समयमा कोरोना भाईरस भन्दा ठूलो भाईरस हाम्रो राजनीतिमा पस्यो । यो भाईरसको उत्पत्ति बालुवाटारबाटै भएको देखियो । लक्षण देखिएको केहि घण्टामै यसको संक्रमण हिमाल, पहाड, तराई हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय, ठूला साना राजनीतिक पार्टी, पूर्व मन्त्री, सांसद हुँदै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकसम्म पुग्यो । यसलाई पनि समयमै पहिचान गरी लकडाउन गर्न भ्याएका कारण संक्रमणले उग्ररुप लिन भने पाएन । तर, राजनीतिक दल, नेता र जनतामा संत्रास अझै बाँकी छ । सत्ता र शक्तिको आडमा फैलाईएकोले यो भाईरसले अझै महामारी ल्याउने हो की भन्ने त्रास जनतामा बाँकी छ ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री ज्यु तपाईं त पछिल्लो समय भाईरस विज्ञ पनि हुनुभएको छ । कोरोनालाई त तातोपानीले धोयो भने फ्याटिए तत्व जान्छ भन्नुहुन्थ्यो यो तपाईंद्वारा नै उत्पत्ति गराईएको भनिएको भाईरसको उपचार कसरी सम्भव छ ? फेरि तपाईं त्रिकालदर्शी बाबा पनि त हो । को अन्तिम प्रधानमन्त्री, कति वर्षमा रेल आउँछ, कति वर्षमा तेलको कुवा खनिन्छ र कुन पार्टी कहिले फुट्छ तपाईं खरर भन्न सक्नुहुन्छ होईन । ? तर, अब त पक्कै तपाईंलाई ग्लानि भएको हुनुपर्छ यो भाईरसले सहि ठाउँमा काम गर्न सकेन भन्ने कुरा बुझिहाल्नुभयो । झण्डै तपाईंलाई नै संक्रमण गर्ने दाउमा थियो यो भाईरस समयमै अध्यादेश फिर्ता लिएर लकडाउन गर्नुभयो र मात्रै ।
प्रधानमन्त्री ज्यू किन होला तपाईंकै पालामा वाईडबडी, मार्सीभात, ७० करोड, यती ग्रुप, ओम्नी ग्रुप, औषधि खरिद प्रकरण हुँदै अहिले त सिधै सांसद उठाउने सम्मको खेल भयो । यी सबै कुरामा तपाईंका प्रियपात्रहरु संलग्न छन् भन्ने कुरा छ्याङ्गै होईन अब त ह्वाङगै भैसक्यो । पछिल्लो घटनाक्रममा त वहालवाला सांसद र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षककै संलग्नता देखियो त्यो पनि तपाईंसँगै डाईरेक्ट कनेक्सन जोडेर । औषधि लिन हिँंडेका, खान नपाएर गाउँ हिंडेकालाई सिधै लौराले हान्ने तपाईंको प्रहरी प्रशासनले महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र सर्वेन्द्र खनाललाई भक्तपुरदेखि महोत्तरीसम्म किन रोक्न सकेन ?
तपाईंले भन्नुभएको होईन पोरोनाले संविधान बुझ्दैन यसले जसलाई पनि संक्रमण फैलाउन सक्छ भनेर ? अनि महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र सर्वेन्द्र खनाललाई कोरोना संक्रमण हुँदैन भन्ने ग्यारेण्टी कसरी गर्नुभयो र महोत्तरी पठाउनुभयो ? भक्तपुरदेखि महोत्तरीसम्म अनि महोत्तरीदेखि मेरियट होटलसम्म चाहिँ कोरोना भाईरस मुक्त कसरी हुन सक्यो ? तपाईंकै सल्लाहमा पटकपटक टेलिफोन सम्पर्क हुँदै रातारात हिँँडेका विचरा हाम्रा माननीय र देशको सुरक्षा निकायको उच्च तहमा पुगिसकेको व्यक्तिलाई यदि केहि भैदिएको भए तपाईंसँग के जवाफ थियो ? सुनिन्छ तपाईंले हतार हतार ल्याएको अध्यादेशको आडमा केहि राजनीतिक दल फुटाएर अझै शक्तिशाली बन्ने लोभ र लालसाका कारण यो स्थिति सृजना भयो । यदि यो साँचो हो भने तपाईं देशको अभिभावक भएर यस्तो गैरजिम्मेवार बन्न मिल्छ त प्रधानमन्त्री ज्यु ?
यो काममा खटिने माननीय ज्युले अझै शानका साथ दैनिक दर्जन बढी मिडीयामा भन्दै हुनुहुन्छ म गएको हो,म सँगै किसान श्रेष्ठ र सवेन्द्र खनाल गएकै हो, डा.शुरेन्द्र यादवलाई राती ३ बजे काठमाडौं ल्याएकै हो । प्रधानमन्त्रीलाई भेटाउन बालुवाटार लैजाने तयारी गरेकै हो, अझै केहि सांसद भूमिगत छन् र मेरो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, नम्बर चाहिने भए म दिन्छु जस्ता कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । यो सबैकुरा तपाईंलाई जानकारी छ वा तपाईंकै निर्देशनमा भैरहेको छ नि हैन त प्रधानमन्त्री ज्यू ? यदि हो भने जनतालाई भनिदिनुस यो कस्तो लोकतन्त्र हो प्रधानमन्त्रीज्यू ?
लकडाउनका कारण ३ करोड जनताले दुःख पाएका छन् । लाखौं जनता भोकै छन् । अनि तपाईं देशको अविभावक भएर अर्को पार्टीका ५/७ जना सांसदले दुःख पाएछन् (त्यो पनि मन्त्री र उपसभामुख हुन नपाएर) भन्दै बालुवाटार भित्राएर के तमासा देखाउन खोज्नुभएको ? किन यति धेरै पिर चिन्ता गर्नुहुन्छ रेणु यादव वा ईस्तियाक राईनको ? तीन करोड नेपालीसँग भएको भन्दा छुट्टै के सम्बन्ध छ तपाईंको ईस्तियाक र यादवहरुसँग ?
तपाईँले २ वर्ष अगाडि बोलेका रेल, तेल, ग्याँस पाईप त जनाताले मागेका छैनन् नि । अनि किन शान्तिसँग बाँच्न दिनुहुन्न जनतालाई ? आफ्ना जनताको न्यूनतम अधिकार गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गर्न नसक्ने, महिला, दलित, जनजाती, मधेशी र अल्पसंख्यकमा पारिएकाहरुको हितमा केहि गर्न नसक्ने अनि माफिया, दलाल र कालोबजारी गर्नेलाई केहि गर्न नसक्ने तपाईं जनतालाई भोको पेट शान्तिसँग बाँच्न पनि नदिने ? यहि हो तपाईंको सुखी नेपाली,सम्बृद्ध नेपाल ?
तपाईंका सल्लाहकार र भित्रियाहरुको कारण बालुवाटारभन्दा बाहिर तपाईंकै पार्टीका नेता र कार्यकर्ता रोईकराई गरिरहेका छन् । भिम रावल, रामकुमारी झाँक्री जस्ता नेतालाई तपाईंका प्रिय पात्रहरुले पद नपाएर कराएको भनेर अपमान गरिरहेका छन् । तपाईंलाई थाहा छ कि छैन कुन्नि बाहिर मेडिकल माफियाहरु, करछली गर्ने, कालोबजारी गर्ने, सरकारको संरक्षणमा कृतिम अभाव सृजना गरी कमाउनेहरुले देशमा कोरोना भन्दा भयावह आतंक मच्चाईसकेका छन् । सडकमा खान नपाउने मजदुर र विद्यार्थीलाई चामल बाडेको आरोपमा तपाईंका सिडियो र प्रहरीले ज्ञानेन्द्र शाहीलाई समातेर थुनेको छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी भोकै हुँदा चामल बाँड्ने हेमराज थापालाई त्यहाँको मेयर र प्रशासनले लखेटेको छ ।
एकातिर लकडाउनले भोकै परेकालाई राहत बाँड्दा तपाईंका मान्छेले नै दुःख दिने अर्कोतिर तपाईंकै प्रियपात्रहरुले मन्त्री र पैसा दिन्छु भन्दै सांसद उठाउने अनि तपाईं अभिभावक भएर यी सबै कुरा पत्तो नपाउने ? यो भन्दा लाजमर्दो कुरा अरु के हुन सक्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?
आजको महामारीमा तपाईंले त हिजो भूकम्पले घर भत्केकाहरुले घर बनाउन सकेका छैनन् वर्षा लागिसक्यो । पाँच बर्षसम्म हुरीबतास, चट्याङ, झरी सहेर बसेका गरीब, निमुखा, भोका, जनताको दैनिकी कसरी चलेको छ ? यिनका बालबच्चा कसरी पालिएका छन् ? वर्षौंदेखि रोग पालेर बस्न बाध्य ती वृद्ध बुबाआमाले औषधि पाएका छन् की छैनन्, यसबारेमा पो चासो राख्ने होईन र ? कसको सांसद बिकाउ छन् ? कुन पार्टीमा किचलो छ ? कुन भ्रष्टलाई संरक्षण चाहिएको छ ? भनेर हिँंड्न मिल्छ र प्रधानमन्त्रीज्यु ? आजका दिनसम्म त समृद्धिको यात्रामा निस्केको दुई तिहाईको सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनु भएको छ प्रधानमन्त्री ज्यु । भोलि के हुन्छ भन्न सकिन्न त्यसैले अलिकति लाज मान्ने बेला भयो की ?
कोरोनाबाट आहत जनतामाथि सरकारी लात
नेपालमा विपद् व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरु